श्रीमानले पनि गरे हुँदैन घरधन्दा ? २२ चैत २०७६
लकडाउनको सदुपयोग : सिर्जनशील काममा बालबालिका अतिथिका पिता घनश्याम मिश्रले छोरीले यति राम्रो चित्र बनाउन सक्छन् भन्ने आफूलाई विश्सासै नलागिरहेको बताए । उनले भने, 'पढाइ आवश्यक छ तर अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि उत्तिकै आवश्यक छ' २२ चैत २०७६
३ महिनाकी सुत्केरी श्रीमती र बच्चाभन्दा बिरामीको सेवामा तल्लीन सुरज प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स चालकका लागि १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीपीई पठाइएको बताए पनि चालकहरूसम्म नआइपुगेको उनको गुनासो छ । 'सीडीओ कार्यालयबाट फोन आएको थियो । गाउन रहेछ त्यहाँ आएको । तर, हामीले ल्याएनौँ। त्यो गाउनले के काम गर्छ र ?', उनले भने २२ चैत २०७६
यी वडाध्यक्ष, जो आफैँ मास्क बनाएर बाँड्छन् उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहमाथि नै पैसा खाएको खुला आरोप लगाएका थिए । ८५ लाख रुपैयाँ भने केही महिनासम्म फेसबुकमा ट्रेन्ड भएको थियो । यसका अतिरिक्त नगरपालिकाका अन्य भ्रष्टाचार मुद्दा उठाउने व्यक्तिको रूपमा उनलाई चिनिन्छ . २२ चैत २०७६
मन्त्रीको आत्मकथन : देश मात्र चलाउने, परिवार चलाउनुपर्दैन ? राष्ट्रिय ध्वजावाहकले एजेन्टमार्फत् विमान चार्टर पठाओस् अथवा प्रत्यक्ष पठाओस्, चासो किन होला ? २-४ करोड तलमाथि भयो भन्दैमा कत्ति चिन्ता हो क्या ! आखिर यिनका खल्तीबाट भर्खर पैसा झिकिएर आउने त होइन . २२ चैत २०७६